Indawo yaseSydney Engahlulwa Isitayela SaseNew York - I-Airbnb
Indawo yaseSydney Engahlulwa Isitayela SaseNew York
Potts Point, New South Wales, i-Australia
Thatha izithako emakethe yamasonto onke yabalimi ukuze uthole isidlo sakusihlwa sokuzenzela endaweni yokudlela emhlophe qwa, yesimanjemanje, noma uphume uye endaweni yokudlela yasendaweni. Impahla ye-eclectic kulesi sikhala esiklanywe ngokwezifiso ibonisa ingxube epholile ye-Potts Point entsha nendala. Isakhiwo sikhathele futhi sikhanga ngaphezu kwesihlahla sonwele saseYurophu, kodwa ngena ngaphakathi kwaleli fulethi elibanzi, futhi uzokwamukelwa 'ekhaya lakho elikude nekhaya' nakho konke ukunethezeka kwezidalwa ukuze uqinisekise ukuhlala ngokunethezeka.
Thatha izithako emakethe yamasonto onke yabalimi ukuze uthole isidlo sakusihlwa sokuzenzela endaweni yokudlela emhlophe qwa, yesimanjemanje, noma uphume uye endaweni yokudlela yasendaweni. Impahla ye-eclectic kulesi sikhala esiklanywe ngokwezifiso ibonisa ingxube epholile ye-Potts Point entsha nendala. Isakhiwo sikhathele futhi sikhanga ngaphezu kwesihlahla sonwele saseYurophu, kodwa ngena ngaphakathi kwaleli fulethi…
“Ifulethi elithokomele elithandekayo lekhaya elikude nesipiliyoni sasekhaya ukuhambahamba uye ezindaweni zokudlela zamakhofi ezokuthutha”
– Erika, umbungazi wakho
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Umatilasi oyi-Pillow-top, umbhede we-queen, Umshini womoya oqandisayo
4.72 (izibuyekezo ezingu-171)
I-Potts Point inakho konke kusukela ezakhiweni ezinhle zobuciko be-deco ukuya emapaki asechwebeni. Thatha ikhofi phansi, bese uphuza ngemva kwesidlo sakusihlwa. Yonke into iwuhambo olufushane ukusuka efulethini: izindawo zokudlela ezimangalisayo namakhefi, amabha apholile, nezitolo zokudlela ezisesitayeleni.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-17172
Hlola ezinye izinketho ezise- Potts Point namaphethelo